उज्याला डा.गोबिन्द केसी सङै उब्जेका केही तिता प्रश्नहरु
गोबिन्द केसी सङको सम्झौता करिब करिब पुरा नै हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित भएको छ। धेरै मुद्दामा शिक्षा मन्त्री गोबिन्द केसी सङ सहमत थिए , समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि यसलाइ सकारात्मक रूपमा लिएपछी गोबिन्द केसीका बिरोधिहरुनै यो बिधेयक तुहाउन बढी सक्रिय देखिन्थे र पर्ख र हेरको अबस्थामा थिए डा. गोबिन्द केसी ।
जब यो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पास हुने अबस्था बन्यो केसी फेरि आफ्नो अनशनकारी अबतारमा प्रकट भए र भने मेरो कुरा हुबहु किन अनुमोदन भएन ? उनको ताजा आक्रोश दुई बिषयमा केन्द्रित देखिन्छ पहिलो मेडिकल कलेजको एफिलेसन प्रक्रिया दोस्रो सिटिइभिटी बाट चिकित्सा शिक्षा फेज आउट । यि बिशयहरुलाइ अलिकति फरक कोण बाट हेरै ।
प्रक्रिया नै केसी ? अनुमोदनको नाटक किन ?
सबैभन्दा पहिला प्रश्न उठ्छ कि ब्यक्ती सङ एउटा मन्त्री वा बार्ता टोलिले गरेको सहमती राज्यको कानुन बन्छ कि बन्दैन ?बन्छ भने संसदके का लागी रु चुनाब के का लागी ? बन्दैन र उनले पनि कानुनी राजको सम्मान गर्छ्न भने प्रतिनिधि सभा उनको रबर स्ट्याम त होइन होला नि? प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले स्वभाबिक रुपले आफ्नो बिबेक प्रयोग गर्छ त्यो सङ बिमती राख्ने दुईवटा बाटहरु मात्र छ्न पहिलो सम्बिधान मान्दिन भन्नु दोस्रो चुनाबको तयारीमा लाग्नु ।
डा.केसि सम्बिधानकै कुरा गर्छन, त्यसो भए के उनको काधमा बन्दुक राखेर कसैले चुनाबी राजनिती त गर्दै छैन ?
सिटिइभीटिका कार्यक्रम तत्काल खारेज गरेर फाइदा कसलाई ?
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो सिटिइभिटी । गोबिन्द केसी जस्तै शिक्षा मन्त्री पनि यसलाई फेजआउट गर्न चहान्छ्न । सिटिभिटीको मुख्य समस्या के हो भने यसको अर्को उच्च तहको पाठ्यक्रम छैन त्यसैले पढ्ने बिद्यार्थी बिद्वान बन्दैन दक्ष जनशक्ति बन्छ । ती दक्ष मानिसहरुलाइ कि त डिग्री लिने बाताबरण बनाउनु पर्छ कि त यसको बिकल्प खोज्नु पर्छ । उहाँ यसलाई बिना बिकल्प बन्द गर्न चहानुहुन्छ । यो गरिब जनता बिरोधि कुरा हो ।
सबैलाई मेडिकल कलेजमा पढाउ अरु चिकित्सा शिक्षा खारेज गरौ भनेको गरिबलाई चिकित्सा शिक्षा बाट टाढा राखौ भनेको हो। यो वर्गीय प्रश्न हो । यो प्रश्नमा उनी सम्भ्रान्त हरुको पक्षमा उभिएका छ्न । चर्चा यतातिर बाट पनि गरिन जरुरी छ।
प्रकारान्तरले मेडिकल सिन्डिकेटको पक्षमा केसी
यतिबेला एउटा फाटेको पर्दाले छेकेको सत्य के हो भने शैक्षिक माफियाहरु मेडिकल कलेज खोल्न जति चाकडि चाप्लुसिमा दैडिन्छ्न त्यतिनै सम्बन्धन नदिन पनि चलखेल हुन्छ । यो भ्रष्टाचारको अर्को रुप हो ।
सोझै बुझिने गरि भनौ गत बर्ष देखि काठमाडौ बिश्वबिधालयले बिराट मेडिकल कलेज र देबदह मेडिकल कलेज को भर्ना आफै गरिदिन थाल्यो र फि तोकियो बत्तिस लाख । अब बत्तीस लाखमै विद्यार्थीले पढ्न पाउने भए अन्य कलेजलाई पनि ठूलो प्रेसर पर्यो जसले चालिस पैतालिस लाख लिदै आएका थिए । उनीहरुको लागि उनिहरुकै शब्दमा प्रती बिद्यार्थी दशलाख सोझै घाटा । अर्थात सय बिद्यार्थी सङ फिस उठाउनेलाई दश करोड घाटा ।
यो पैसा माफियाहरुले राजनितीक ब्रह्माण्डमा फिजाउथे र नयाँ सम्भन्धन नदिन दवाब सिर्जना गर्थे । त्यसको बदला गरिबका छोराछोरी बङलादेशमा गएर ठगिनु पर्यो ।
यो प्रवृत्ति अझै जिउदै छ। त्यसैले गरिबलाई नयाँ कलेज नखुल्नु वा खुल्नुले केही फरक पार्दैन । यो भ्रटचारीहरु बिचकै लडाइ हो । चिकित्सा शिक्षा बिधेयक दुबै कित्ताका माफियाहरु सङ जोगिने गरि आएको छ । यसको श्रेय ड . गोबिन्द केसीलाई नै सबैभन्दा बढी दिइनु पर्छ। तर सकारात्मक नियतका बाबाजुत केसी प्राकारान्तरले पुरानाहरुको सिण्डिकेटको पक्षमा दुरुपयोग हुने खतरा भने बढदै छ।
भ्रष्टाचारको बिरोध गर्दै अर्काथरी भ्रस्टाचारीको सेवा गर्ने नियती बाट केसीलाई जोगाउनु पर्छ र उहाँ पनि जोगिनु पर्छ।
जसरी चिकित्सा शिक्षा बिधेयक आयो यसको प्रस्ताबकर परिकल्पनाकार डा. गोबिन्द केसी नै हुन । जसमा प्रतिपक्षले आफ्नो स्वामित्व खोज्यो वा कम्तीमा सरकार को हारको रुपमा यसलाई प्रचार गर्न खोजियो । तर, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले रुचि पुर्बक यो खेल खेले र गोल पनि गरे ।
गोल त भयो रेफ्री ले काउन्ट गर्नै मानेन रेफ्री अर्थात डा.केसी गोल देखेर फेरि बिक्षिप्त भए ।यसका पाटा पक्षहरू बिस्तारै सार्बजनिक होलान् ।
यो बिक्षिप्तताका बाबाजुत जे जति शुधार भएको छ यसका नायक गोबिन्द केसी नै हुन । उनलाई जनताको स्तर बाट फेरि पनि धन्यवाद ।